musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India yekufamba uye kushanya kwakatarisana nedambudziko rezvehupfumi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Mhedzisiro yedenda iri inoramba ichikanganisa hupenyu nehupenyu hwekufamba kweIndia nekushanya pamwe nekugamuchira vaenzi kwegore rechipiri rakateedzana. Nepo mamwe matunhu achivhurika zvishoma nezvishoma zvakare, kurwira kuri kuenderera nekuwana raramo.
Indasitiri yekushanya neyekushanya yeIndia yakanga yapa US $ 194 bhiriyoni kuhupfumi hweIndia mu2019 uye yakagadzira angangoita mamirioni makumi mana emabasa, kureva, 40 muzana yebasa rayo rose.
Izvi zvese zvakamira nekuda kwedenda uye izvi zvakagadzira mhedzisiro kuburikidza neindasitiri.
Mhedzisiro yacho yave yekuti mahotera mazhinji nemabhizinesi akavhara achigadzira kurasikirwa kwemabasa kune vazhinji veavo vaivimba neindasitiri iyi kuti vawane raramo.
Nyanzvi dzehutano dzakafungidzira kuti yechitatu wave yeCOVID-19 haidziviriki. Hurumende inoda kutora matanho izvozvi uye nekupa matanho ekukurumidza ekugadzirisa dambudziko rekuchimbidza rakatarisana neindasitiri yekushanya neyekushanya kuIndia.
Iyo Federation of Indian Chambers of Commerce & Indasitiri (FICCI) yakumbirazve kuhurumende kuti imiswe pamari yese inoshanda, mukuru, mubhadharo, zvikwereti nemadhodhi akawedzera akapera muna Nyamavhuvhu 2020 kuti iwedzerwe nerimwe gore rimwe chete, kureva, Nyamavhuvhu 1.
Sangano reRBI rekugadzirisa, iro rakagadzirirwa panguva yekutanga wave ye denda, inoda kuongororwa. Nekuenderera mberi kwekukanganiswa kwechipiri chechipiri, zvinotora makore asingasviki 4-5 kuti indasitiri yehotera kuti ione kudzoka kune chimwe chimiro chechinyakare mumabasa ayo. Mumamiriro ezvinhu aya, iyo nguva yekugadzirisa uye zviyero zvinoda kuongororwa. Zvakakosha kuti nguva yekumisikidza chikamu ichi iwedzerwe kusvika Kurume 2024 - 2025.
FICCI yakakumbirawo hurumende kuti iwedzere mari yekubhadhara yeEmergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) kusvika pamakore masere (makore mana ekumiswa pamwe nemakore mana ekubhadhara). Vafambi vekushanya, vari vamwe vevakakanganiswa zvakanyanya muchikamu ichi, vari kuda zvakanyanya zvikwangwani zveSevhisi Kunze kwenyika kubva kuIndia Scheme (SEIS) zvegore remari 8-4 iro richiri kufanira kupihwa kwavari. Izvi zvinozovabatsira kuti vagare pamusoro pematambudziko.
Kudzoserwa kweGST uye kufambisira mberi kubhadhara mutero padanho reHurumende yeCentral uye kubviswa kwemari kune chero anouya marezinesi, mvumo / kuvandudza uye kubheja mapakeji ekubhadhara uye kutsigira mihoro yevashandi ichapawo zororo. Hurumende inoda kuzivisa matanho ekuyamura izvozvi kuti indasitiri ive netariro yekupona mudambudziko.
Indasitiri yekufambisa neyekushanya yeIndia inodawo kuenderera mberi nerutsigiro kubva kuhurumende kumutsiridza uye kuramba wakasimba mune ramangwana. FICCI yakurudzira izvo India kushanya inofanirwa kuverengerwa mune yakawiriranwa runyorwa rweBumbiro kuitira kuti ese ari maviri maCentral nehurumende vagone kuronga mafambiro ezvekushanya mukukura kwe Tourism. Kuti imutsidzire kushanya kwemunyika, hurumende inofanirwa kupa mutero unodzosera kumazana mashanu ezviuru emari yekushandisa pazororo reDzimba mumitsara yeLeave Travel Allowance (LTA).
Shanduko dzakakosha dzemitemo dzakadai sekupa mamiriro ezvivakwa kumahotera ese, kupa chinzvimbo chekutumira kune dzimwe nyika mari dzekushambadzira & mahotera nekumisikidza "Amusement Manufacturing Hub" pasi peAtmanirbhar Bharat Abhiyan kumatunhu ese kuchatsigira kusimudzira kwese chikamu.
India Yekufamba uye Yekushanya indasitiri inotaura
Anoremekedzwa zvikuru India wekufambisa uye wekushanya mutungamiri, Amit Prasad, CEO weLe Passage kuenda kuIndia, ari kunetsekana zvakanyanya nezve mamiriro azvino indasitiri yekushanya neyekushanya. Vakati hapana zvakawanda zviri kuitwa neHurumende yeIndia kumutsidzira mafambiro nekushanya munyika. Akawedzera kuti indasitiri yenyika yave pedyo nekudonha, uye avo kusvika parizvino vakakwanisa kurarama muindasitiri vanofanirwa kurega vashandi vachienda nekucheka mibairo kuti vangoramba vari pamusoro.
MuIndia, kubva munaNdira 3, 2020, kusvika nhasi, Chikumi 23, 2021, kwave nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi masere nemakumi manomwe ane makumi manomwe nemapfumbamwe akasimbiswa nyaya dze COVID-30,028,709 ine vanhu 19 vakafa, vakaziviswa kuWorld Health Organisation (WHO). Kubva munaJune 390,660, 15, 2021 mishonga yekudzivirira yakapihwa.